Edith Cowan University - Tacliinta Sare Abroad ee Australia
gaabinta : ECU
aasaasay : 1991
Ardayda (qiyaastii.) : 21000
Ha iloobin in aad discuss Edith Cowan University
t waa farxad weyn in aan idinku soo dhoweyno Edith Cowan University.
At ECU aynu ku hanuunsanahay by qiimaha of our sharafta, ixtiraam, baaritaan buuxa iyo wanaagga qof ahaaneed. Arrinta aan diiradda saarno on cilmiga iyo cilmi baarista yahay waxyiga hawlgelinta iyo iskaashi la jirka kuwa bulshooyinka badan ee aan la sameeyay in ay u adeegaan.
Research at ECU fidiyaa aqoonta iyo wanaajinaya tayada nolosha ee Australiyaanka iyo dadka adduunka oo dhan. mudnaanta cilmi Our diiradda on xalinta dhibaatooyinka dunida dhabta ah ee guud ahaan bulshada, dhaqaale, domains jirka iyo deegaanka.
dhidibada loo aasay 1991, ECU ayaa si degdeg ah u koray galay jaamacad tayo leh qanacsanaanta ardayga u fiican ah oo caalamku aqoonsan yahay cilmi.
Ardayda iyo qalin at ECU waa mida ugu fiican dunida, la door badan wixii muhiim ah ee bulshadeena. Waxay guulaha fiican ayaa loo aqoonsan yahay Australia oo dhan iyo kuwa caalamiga ah iyada oo abaalmarinta, deeqo, deeq iyo abaal-marinno.
ECU waxaa ka go'an inay sii waynaanaya qaybgalka iyo burburitaan caqabadaha in la xaddido galo waxbarashada, oo aan la sii shaqo our ku saabsan xoojinta iyo horumarinta wadooyinka soo galo kale oo ay waxbarashada sare.
Waxaan nahay jaamacad in la qiimeeyo kala duwanaanta iyo this waxa uu tusaale by our askartii arday dhaqamada ka bilaabanaya tiro balaadhan oo ah da '. Waxaan sidoo kale taageero sinaanta jinsiga iyo ECU waxaa horumarinta go'an this iyada oo xubin naga mid ah Axdiga Athena Swan ee Australia.
Waxaan kugu dhiirinaynaa in aad wax badan uga ogaato oo ku saabsan sida ECU kaa caawin kartaa inaad gaarto oo aad ka iman kara.
Edith Cowan University (ECU) waxay bixisaa deegaanka waxbarashada ugu fiican ee dadka doonaya in ay gaaraan awoodooda.
Waxay ku taallaa ee Western Australia, cilmiga warshadaha-khuseeya iyo cilmi, jawi waxbarasho taageero iyo goobaha award-winning awood ardayda ECU in dheeraad ah samayn badan oo kaliya ay u noolaadaan Adduun - ay baraaraan waa in.
dhidibada loo aasay 1991, ECU qaaday fursad ay ku ugu qaabeeyo waxbarashada jidka sare waxaa loo dhiibaa jawi campus kala oo dhiirigalin leh.
koorsooyinka ECU lagu horumariyo oo la tashanaya warshadaha, iyo Macalimiin khibrad u warshadaha ballaaran iyo shabakadaha. Waa sababta ardayda ECU filan kartaa fursado meelaynta, qataan, practicums iyo dhacdooyinka shabakadaha sida qayb ka mid ah waxbarashadooda.
Habkan ayaa abaal marin ratings shan xiddig ku barayay oo tayo leh ka badan toddoba sannadood ee la soo dhaafay, oo ay la socdaan si joogto ah ratings sare ee qanacsanaanta qalin iyo xirfadaha generic, sida ay soo sheegeen in ka Good Jaamacadaha Guide.
cilmi-heer caalami ECU ee ku dadaashaa inay noqoto farqiga u ah in ay bulshada ee Western Australia oo ka baxsan. ECU diiradda saarayaa bulshada our shaqeeya, Ururada ganacsiga iyo xukuumadda si ay u xaliyaan dhibaatooyinka dunida dhabta ah.
University ayaa la magacaabay ka dib markii Edith Cowan Dirksey, naagtii ugu horeeyay ee lagu doorto Baarlamaanka Australia. Her nolosha waxaa ka go'an in ay aaminsan yihiin in waxbarashada ahaa furaha koboca, isbeddelka iyo horumarinta bulshada.
Her tusaale wargelinaysaa qiimaha ECU ee sida waxaan ku faanaa horumarinta qalin awood kuwaas oo hogaanka ku hawlan iyo nolol ayaatiin leh ee bulshada, taas oo ay ku nool yihiin iyo shaqada.
ECU leedahay in ka badan 27,000 ardayda undergraduate iyo postgraduate. Waxa kale oo aanu sanad walba soo dhawaynaynaa in ka badan 4,000 ardayda caalamiga ah, asal ahaan ka badan 100 dalalka.
From 2016, our sideed Dugsiyada wadajir samatabbixin doonaa ka badan 300 koorsooyin kala duwan ee guud ahaan Health & Sciences Medical, Engineering, Waxbarasho, Arts & Humanities, Ganacsiga & Law, Nursing & ummulisooyinka, Science Academy oo ku Western Australian of Farshaxanka.
Koorsooyinka waxaa la siiyaa on our saddex xarumood - Joondalup iyo Buur Lawley ee magaalada Perth iyo Campus South West at Bunbury, 200km koonfur ka xigta magaalada caasimadda ah. ECU sidoo kale bixisaa Suite dhamaystiran of fursadaha waxbarasho online.
ECU daro Academy dunida-caan Western Australian of Farshaxanka, School ugu da'da weyn oo ugu caansan Waxbarashada ee Western Australia, barnaamijka ugu wayn Nursing ee Gobolka, iyo Kurongkurl Katitjin, Centre for Education Australian Indigenous iyo Research our.
School of Business and Law Broad disciplines: Ganacsiga iyo Sharciga
School of Arts and Humanities Broad disciplines: Isgaarsiinta, Arts, Humanities, Psychology, Social Sciences, Work Social, Criminology and Justice
School of Education Broad disciplines: Teacher education for Early Childhood, Primary and Secondary schools
School of Engineering Broad disciplines: Full range of Engineering specialisations
School of Medical and Health Sciences Broad disciplines: Exercise and Health Sciences, Science Medical, Science Biomedical, Speech Pathology and Paramedicine
School of Nursing iyo ummulisooyinka Broad disciplines: Nursing iyo ummulisooyinka
School of Science Broad disciplines: Biology and Environmental Sciences, xisaabta, physics, Kiimikada noole, Computing and Security Sciences
In 1982 these colleges were all merged to form the Western Australian College of Advanced Education (WACAE) – with campuses in Churchlands, Nedlands, Claremont, Bunbury and Joondalup.
Western Australian College of Advanced Education (WACAE) was granted university status on 1 January 1991 and changed its name to Edith Cowan University.
In 1991, the university purchased the house that Cowan, her husband and family resided in for approximately 20 sano. The house was reconstructed on the university’s Joondalup Campus with the assistance of the West Coast College of TAFE, the reconstructed house was opened in 1997. Edith Cowan House, Dhismaha 20 on the university’s Joondalup Campus, currently plays host to the Peter Cowan Writer’s Centre.
Ma rabtaa discuss Edith Cowan University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Edith Cowan University rasmiga ah Facebook
Jaamacadda Qaranka ee Australia Canberra